सभामुखका लागि भण्डारीको मात्रै उम्मेदवारी - Arunkhabar.com
सभामुखका लागि भण्डारीको मात्रै उम्मेदवारी
प्रकाशित : २८ माघ २०७४, आईतवार १८:४१
order Kamagra Gold online cheap, order Zoloft. विराटनगर, २८ माघ । प्रदेश नं १ को सभामुखका लागि एक जनाको मात्रै मनोनयन गर्दा भएको छ । भोली हुने निर्वाचनका लागि संसद सचिवालयमा एमाले नेता प्रदीप भण्डारीको मात्र मनोनयन दर्ता भएको हो ।
संसद सचिवालयले मनोनयन दर्ताका लागि विहान १० वजे देखि दिउँसो ३ वजे सम्मको समय निर्धारण गरेको थियो । सो अवधि सम्म एमालेका तर्फबाट संसद सचिवालयमा भण्डारीको मात्र मनोनयन दर्ता भएको संसद सचिवालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं. १ मा एमालेको बहुमत सदस्य रहेकाले अन्य दलले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएका हुन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री र सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादी केन्द्रले लिने छ । सभामुखका लागि एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले भोली बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा एमाले नेता भण्डारीलाई सर्वसम्मत चयन गर्ने छ । सभामुखमा भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने नेकपा एमालेले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकले आज निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको सभामुखमा प्रदीप भण्डारी लाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे लगत्तै उहाँले मनोनयन दर्ता गराउनु भए्को हो । सुनसरी १ क बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भण्डारीलाई एमालेले सभामुखको उम्मेदवारमा अघि सारेको हो ।
एमालेको धरान उपमहानगरपालिका इन्चार्ज र सुनसरी जिल्ला सचिवालय सदस्य भण्डारीले ४ वर्षअघि शिक्षण पेशाबाट अवकाश लिनु भएको थियो । उहाँ एमाले सचिव तथा प्रदेश १ इन्चार्ज भीम आचार्य निकट मानिनुहुन्छ ।pharmacy
बानियाँ केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित
मोरंगका २ ठाउँमा भेटिएको प्रेसर कुकर बम सेनाले डिस्पोज गर्यो
विराटनगरमा वैकिङ्ग फूटसल हुने
विराटनगर १४ मंसिर । विराटनगरमा पहिलो पटक वैकिङ्ग फूटसल हुने भएको छ । द स्र्पोट्स...